သင်၏ကျန်းမာရေးအတွက်အကျိုးကျေးဇူး ၁၀ ခု - Wisepowder
glutathione အကျိုးခံစားခွင့်များ သက်ရှိသက်ရှိများကို antioxidant အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။ ၎င်းသည်လူ့ဆဲလ်တိုင်းတွင်အမိုင်နိုအက်ဆစ်ဒြပ်ပေါင်းတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ သက်ရှိအားလုံးသည် ၄ ​​င်း၏ကိုယ်ခန္ဓာတွင် glutathione ရှိသည်။ ၎င်းသည်အစွမ်းထက်သောဓါတ်တိုးပစ္စည်းဖြစ်ပြီးလုံလောက်သောအဆင့်တွင်ရှိပါကအယ်ဇိုင်းမားရောဂါ၊ နှလုံးရောဂါနှင့်လေဖြတ်ခြင်းကဲ့သို့သောအန္တရာယ်ရှိသောကျန်းမာရေးအခြေအနေများမှကျွန်ုပ်တို့ကိုကာကွယ်နိုင်သည်။
ဒီ antioxidant ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာထုတ်လုပ်ပေမယ့် glutathione ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲထိုးသွင်းနိုင်ပါတယ်။
Glutathione သည်အမိုင်နိုအက်ဆစ် (၃) မျိုးပေါင်းစပ်။ ဖွဲ့စည်းထားသောဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Cysteine, glutamic acid နှင့် glycine ။ ၎င်းသည်ဆဲလ်များ၏အိုမင်းခြင်းကိုကာကွယ်တားဆီးရန်နှင့်နှောင့်နှေးစေသည့်အားကောင်းသော antioxidant တစ်ခုဖြစ်သည်။ Glutathione သည်ဆဲလ်များပျက်စီးခြင်းကိုကာကွယ်ပေးပြီးအသည်းအတွင်းရှိအန္တရာယ်ရှိသောဓာတုပစ္စည်းများကို detoxifies ပြုလုပ်ပေးသည်။ ၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်အားအလွယ်တကူထုတ်လွှတ်နိုင်သည့်ဆေးများနှင့်ပေါင်းစပ်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ ၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်၏ကိုယ်ခံစွမ်းအားကိုမြှင့်တင်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိဆဲလ်များကြီးထွားမှုနှင့်သေခြင်းကိုထိန်းညှိခြင်းတို့၏အရေးကြီးသောလုပ်ဆောင်မှုကိုလည်းလုပ်ဆောင်သည်။ glutathione အဆင့်ကိုအိုမင်းခြင်းနှင့်အတူလျှော့ချရန်သတိပြုမိသည်။
1. oxidative စိတ်ဖိစီးမှုသက်သာ
ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိအခမဲ့အစွန်းရောက်များထွက်လာပြီးခန္ဓာကိုယ်ကသူတို့ကိုမတိုက်ထုတ်နိုင်သည့်အခါ၎င်းသည်အောက်စီဂျင်ဓာတ်တိုးမှုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အောက်စီဂျင်ဓာတ်တိုးခြင်းများကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာသည်ဆီးချိုရောဂါ၊ အဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်ကင်ဆာကဲ့သို့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအခြေအနေများကိုထိခိုက်နိုင်သည်။ Glutathione သည်ခန္ဓာကိုယ်အားဤရောဂါများကိုကာကွယ်ရန်ကူညီပေးသော oxidative stress ကိုသက်သာစေရန်ကူညီသည်။
ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမြင့်မားသော glutathione ပမာဏကိုလည်းလည်းမြင့်တက်စေသည်ဟုလူသိများကြသည် antioxidants။ ဤသည်တိုးပွားလာသည် antioxidants နှင့် glutathione သည် oxidative stress ကိုလျော့နည်းစေသည်။
Glutathione သည်လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိအဆီဓာတ်တိုးပွားခြင်းကိုတားဆီးနိုင်စွမ်းရှိသောကြောင့်နှလုံးရောဂါနှင့်အခြားနှလုံးရောဂါဖြစ်ပွားမှုများကိုလျှော့ချပေးနိုင်သည်။ နှလုံးရောဂါများသည်သွေးလွှတ်ကြောနံရံများ၏အတွင်းပိုင်းတွင်သွေးလွှတ်ကြောပြားများစုဆောင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
Low-density lipoproteins (LDL), ဒါမှမဟုတ်မကောင်းတဲ့ကိုလက်စထရော, သွေးလွှတ်ကြောများ၏အတွင်းပိုင်း linings ပျက်စီးစေခြင်းဖြင့် plaque ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဤအပြားများသည်ကွဲသွားပြီးသွေးကြောများကိုပိတ်ဆို့နိုင်သည်၊ သွေးစီးဆင်းမှုကိုရပ်တန့်စေပြီးနှလုံးရောဂါသို့မဟုတ်လေဖြတ်ခြင်းများဖြစ်စေနိုင်သည်။
Glutathione သည် glutathione peroxidase ဟုခေါ်သောအင်ဇိုင်းနှင့်အတူсуперအောက်ဆိုဒ်များ၊ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်၊ လွတ်လပ်သောအစွန်းရောက်များနှင့် lipid ဓာတ်တိုးစေသည့် lipid peroxides များကိုထိန်းချုပ်သည်။ ၎င်းသည်လက်စထရောအားမကောင်းသောသွေးကြောများကိုမထိခိုက်စေခြင်း၊ ထို့ကြောင့် Glutathione သည်နှလုံးရောဂါနှင့်အခြားနှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ချေများကိုလျှော့ချပေးသည်။
antioxidants နှင့် glutathione များချို့တဲ့ပါကအသည်းဆဲလ်များပိုမိုသေဆုံးလေ့ရှိသည်။ ၎င်းသည်အသည်းနှင့်အသည်းရောဂါများကိုတိုက်ဖျက်ရန်အသည်းစွမ်းရည်ကိုလျော့နည်းစေသည်။ Glutathione သည်လုံလောက်သောပမာဏရှိပါကသွေးထဲတွင်ပရိုတိန်း၊ ဘီလီရူဗင်နှင့်အင်ဇိုင်းများကိုတိုးပွားစေသည်။ ၎င်းသည်လူတစ် ဦး အားအဆီနှင့်အသည်းအသည်းရောဂါများမှပိုမိုမြန်ဆန်စွာသက်သာစေနိုင်သည်။
တစ်ဦးကအမြင့်ဆုံး glutathione သောက်သုံးသော အသည်းရောဂါနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီအားသွေးကြောသွင်းဆေးပေးသည့်အခါ glutathione သည်ရောဂါအတွက်ထိရောက်ဆုံးကုသမှုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အသည်း၌ဆဲလ်ပျက်စီးမှုကိုညွှန်ပြသည့် malondialdehyde ကိုသိသိသာသာလျှော့ချပေးသည်။
နှုတ်ဖြင့်အုပ်ချုပ်သည့် glutathione သည် antioxidant သည်အရက်မဟုတ်သောအသည်းအသည်းရောဂါကိုခံစားနေရသူများအတွက်အပြုသဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်။
ထိခိုက်ဒဏ်ရာတစ်ခုကြောင့်ဒဏ်ရာရသည့်areaရိယာရှိသွေးကြောများကိုကျယ်ပြန့်စေပြီးထိုဒေသသို့သွေးများပိုမိုစီးဆင်းနိုင်သည်။ ဤသွေးတွင်ရောဂါပိုးကူးစက်မှုဖြစ်နိုင်ချေကိုတားဆီးရန်floodရိယာကိုလွှမ်းမိုးနေသောကိုယ်ခံအားဆဲလ်များဖြင့်တင်ထားသည်။ ဒဏ်ရာရareaရိယာပျောက်ကင်းသွားသည်နှင့်တပြိုင်နက်ရောင်ရမ်းခြင်းများကျဆင်းလာပြီးကိုယ်ခံအားဆဲလ်အရေအတွက်လျော့နည်းသွားသည်။ သို့သော်စိတ်ဖိစီးမှု၊ အဆိပ်အတောက်၊ ကျန်းမာရေးနှင့်မညီညွတ်သည့်အဟာရများကြောင့်ထိခိုက်သည့်ကျန်းမာရေးနှင့်မညီညွတ်သည့်ကိုယ်ခန္ဓာတွင်ငွေကြေးဖောင်းပွမှုသည်လျင်မြန်စွာလျော့နည်းသွားမည်မဟုတ်ပါ။
Glutathione သည်ထိုကဲ့သို့သောရောဂါများကိုခုခံအားဖြူဆဲလ်များအားမြှင့်တင်ပေးခြင်းဖြင့်ကူညီသည်။ ငွေကြေးဖောင်းပွမှု၏ပြင်းထန်မှုအပေါ် မူတည်၍ ဒဏ်ရာရသည့်နေရာသို့သွားသောအဖြူရောင်ဆဲလ်အရေအတွက်ကိုသူတို့ကထိန်းချုပ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့အသက်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင် glutathione ထုတ်လုပ်မှုလျော့နည်းလာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာရှိ glutathione ပမာဏသည်နည်းလာသည်။ ဒီရလဒ်လျော့နည်းစေသည် အဆီလောင်ကျွမ်းမှုကို ငါတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ။ ထို့ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်သည်အဆီပိုသိုလှောင်ထားသည်။ ၎င်းသည်အင်ဆူလင်ကိုလွယ်ကူစွာထိခိုက်စေသည်။
cysteine ​​နှင့် glycine ပမာဏကိုမြင့်စေသောအစားအစာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းထုတ်လုပ်မှု glutathione ကိုတိုးပွားစေပါသည်။ ဤသည်မြင့်မားသော glutathione သည်အင်ဆူလင်ကိုခုခံနိုင်စွမ်းနှင့်အဆီပိုမိုများပြားလာစေသည်။
6. Peripheral သွေးကြောရောဂါလူနာတိုးတက်လာ mobility ကြည့်ပါ
Peripheral artery disease သွေးကြောနံပြားများကြောင့်ပိတ်ဆို့ရသူတွေကိုထိခိုက်စေသည်။ ရောဂါအများစုသည်လူတစ် ဦး ၏ခြေထောက်များကိုသာသက်ရောက်သည်။ ပိတ်ဆို့ထားသောသွေးကြောများသည်ကြွက်သားများလိုအပ်သည့်အခါလိုအပ်သောသွေးပမာဏကိုကြွက်သားများသို့မထောက်ပံ့နိုင်သည့်အချိန်တွင်ဖြစ်ပွားသည်။ အရံအစသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါခံစားနေရသူတစ် ဦး သည်လမ်းလျှောက်သောအခါနာကျင်မှုနှင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုများကိုခံစားရလိမ့်မည်။
တစ်နေ့လျှင်နှစ်ကြိမ်သွေးကြောသွင်းသည့်ဂလူးသီယာယွန်သည်သူတို့၏အခြေအနေများသိသိသာသာတိုးတက်မှုရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်။ လူတစ် ဦး ချင်းစီသည်ခရီးဝေးလမ်းလျှောက်နိုင်ပြီးမည်သည့်နာကျင်မှုကိုမျှမညည်းညူခဲ့ကြပါ။
7. အရေပြားအတွက် Glutathione
Glutathione ၏အကျိုးကျေးဇူးများသည်ကျန်းမာသောအသားအရေကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်၎င်းကိုကုသရန်အထိကျယ်ပြန့်သည်။ ဝက်ခြံ၊ အရေပြားခြောက်ခြင်း၊ နှင်းခူခြင်း၊ အရေးအကြောင်းများနှင့်မျက်လုံးမျက်လုံးများကိုသင့်လျော်သော glutathione ဆေးဖြင့်ကုသနိုင်သည်။
glutathione ကိုအရေပြားအတွက်အသုံးပြုခြင်းသည် melanin ထုတ်လုပ်သော tyrosinase ကိုတားဆီးသည်။ glutathione ကိုကြာရှည်စွာအသုံးပြုခြင်းသည် melanin နည်းသောထုတ်လုပ်မှုကြောင့်အရေပြားပိုမိုပေါ့ပါးစေသည်။ ၎င်းသည် psoriasis ကိုလျှော့ချရန်၊ အရေပြား elasticity ကိုတိုးတက်စေရန်နှင့်အရေးအကြောင်းများကိုလျှော့ချရန်ပြသခဲ့သည်။
ငလျင်များသည်လူတို့ခံစားနေရသောရောဂါလက္ခဏာများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည် ပါကင်ဆန်ရောဂါ များသောအားဖြင့်ခံစားရသည်။ အကြောင်းမှာရောဂါသည်ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်ကိုထိခိုက်စေသည်။ glutathione ၏သွေးကြောသွင်းဆေးသည်ရောဂါမှတစ် ဦး ချင်းစီ၏တိုးတက်မှုကိုပြသသည်။ ကုသမှုသည်စောင့်ကြည့်လေ့လာနေသည့်လူနာများအတွက်တုန်ခါမှုနှင့်တင်းကျပ်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်။ Glutathione သည်ပါကင်ဆန်ရောဂါခံစားနေရသောလူနာများအားရောဂါလက္ခဏာပြသသည့်လက္ခဏာများကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်ပိုမိုလွယ်ကူစေမည်ဟုယုံကြည်ရသည်။
9. Autistic ကလေးငယ်များအား oxidative ပျက်စီးမှုကိုလျှော့ချပေးခြင်းဖြင့်ကူညီသည်
အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာခံစားနေရသောကလေးများသည်၎င်းတို့၏ ဦး နှောက်အတွင်း၌အောက်စီဂျင်ဓာတ်တိုးမှုမြင့်မားကြောင်းဖော်ပြသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် glutathione ပမာဏသည်အလွန်နည်းပါးသည်။ ၎င်းသည်ကလေးများသည်မာကျူရီကဲ့သို့သောဓာတုပစ္စည်းများကြောင့်အာရုံကြောပျက်စီးမှုကိုပိုမိုဖြစ်စေနိုင်သည့်အန္တရာယ်ကိုမြင့်တက်စေသည်။
ပါးစပ်နှင့်လိမ်းဆေး glutathione သောက်သောဆေးများဖြင့်ကုသသောကလေးများသည်ပလာစမာ sulfate၊ cysteine ​​နှင့် blood glutathione အဆင့်များသိသိသာသာတိုးတက်မှုရှိသည်။ ၎င်းသည် glutathione ကုသမှုသည် ဦး နှောက်၏လုပ်ဆောင်မှုကိုတိုးတက်စေရန်နှင့်အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာရှိသည့်ကလေးများ၏ဘဝကိုတိုးတက်စေမည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
10 ။ autoimmune ရောဂါများကိုတိုက်ဖျက်ရန်ကူညီနိုင်ဘူး
Autoimmune ရောဂါများတွင် celiac ရောဂါ၊ အဆစ်နှင့် lupus တို့ပါဝင်သည်။ ဤရောဂါများသည်နာတာရှည်ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်နာကျင်မှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ Glutathione သည်ခန္ဓာကိုယ်၏ခုခံအားတုံ့ပြန်မှုကိုလှုံ့ဆော်ခြင်းသို့မဟုတ်လျှော့ချခြင်းဖြင့်ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ဆေးသမားများအား autoimmune disorders ခံစားနေရသောလူများတွင်စိတ်ဖိစီးမှုလျော့နည်းစေသည်။
Autoimmune ရောဂါများသည်အချို့သောဆဲလ်များရှိဆဲလ် mitochondria ကိုပျက်စီးစေသည်။ Glutathione သည်အခမဲ့အစွန်းရောက်များနှင့်တိုက်ခိုက်ခြင်းအားဖြင့်ဆဲလ် mitochondria များကိုကာကွယ်ပေးသည်။ Glutathione သည်အဖြူရောင်ဆဲလ်များနှင့်ရောဂါပိုးကူးစက်မှုကိုတိုက်ဖျက်သော T ဆဲလ်များကိုလှုံ့ဆော်သည်။ glutathione ကတီဘီဆဲလ်များသည်ဘက်တီးရီးယားနှင့်ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုကိုခုခံတွန်းလှန်နိုင်စွမ်းတိုးလာသည်ကိုပြသခဲ့သည်။
ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလာတာနဲ့အမျှခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ glutathione ပမာဏလျော့ကျသွားတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှ glutathione အဆင့်ကိုပြန်လည်ကောင်းမွန်စေရန်ကူညီပေးမည့်အစားအစာများကိုစားရန်လိုအပ်သည်။ glutathione တွင်သဘာဝပါဝင်သော glutathione သို့မဟုတ်အာဟာရဓာတ်တိုးပွားစေသည့်အစားအစာများစွာရှိသည်။
glutathione အစားအစာများသွားသောအခါ၊ whey protein ၌ gamma-glutamylcysteine ​​ပါရှိသည်။ ၎င်းသည်ငါတို့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အမိုင်နိုအက်ဆစ်နှစ်ခုကိုခွဲခြားရန်လွယ်ကူစေသည့် glutathione နှင့် cysteine ​​ပေါင်းစပ်မှုဖြစ်သည်။ သူတို့ကကောင်းတဲ့ antioxidants တွေပါ။
· Allium အစားအစာများ
ကောင်းမွန်သော glutathione ဖြည့်စွက်ဆေးများသည် Allium အမျိုးအစားမှရသောအပင်များမှဆာလဖာများပေါများသည်။ ဆာလ်ဖာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုသဘာဝသဘာ ၀ glutathione ထုတ်လုပ်ရန်ကူညီပေးသည်။ ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ scallions၊ chives, shallots နှင့် leeks သည် allium genus နှင့်သက်ဆိုင်သောအစားအစာများဖြစ်သည်။
· Cruciferous ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ
Cruciferous ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေမှာမင်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ glutathione အဆင့်ကိုမြှင့်တင်ပေးမယ့် glucosinolates ပါရှိပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ထိုဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်အပင်များတွင်ဆာလဖာအနံ့ရှိသည်။
ဂေါ်ဖီထုပ်, ပန်းဂေါ်ဖီ, ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း, kale, bok choy, ဘရပ်ဆဲလ်ပင်ပေါက်, arugula, မုန်လာဥ, ရွက်နှင့် collard အစိမ်းရောင်အားလုံး cruciferous ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ။
· alpha-lipoic acid ရှိသည့်အစားအစာများ
အမဲသား၊ အော်ဂဲနစ်အသား၊ ဟင်းနုနွယ်ရွက်၊ ဘီယာတဆေးနှင့်ခရမ်းချဉ်သီးများသည်ကြွယ်ဝသောကြောင့် glutathione ဖြည့်စွက်ဆေးများဖြစ်သည်။ alpha-lipoic အက်ဆစ်။ ဒီအက်ဆစ်ကမင်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ glutathione အဆင့်ကိုတိုးပွားစေတယ်။
Mineral selenium သည်သဲလွန်စတစ်ခုအနေဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ glutathione နှင့်အခြား antioxidants အဆင့်များကိုတိုးပွားစေသည်။ ဆယ်လီနီယမ်ပါ ၀ င်သည့်အစားအစာများသည်ကမာများ၊ ပင်လယ်စာများ၊ ကြက်ဥများ၊ ဘရာဇီးအခွံမာသီး၊ ကညွတ်၊ မှိုနှင့်အစေ့တစ်ခုလုံးဖြစ်သည်။
Glutathione ဖြည့်စွက်ချက်များ အမျိုးမျိုးသောပုံစံများအတွက်လာ။ သူတို့ကနှုတ်ယူနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်ခံတွင်းဖြင့်သောက်သည့် glutathione သည်ဒြပ်ပေါင်း၏ခန္ဓာကိုယ်အဆင့်ကိုပြန်လည်ဖြည့်တင်းရာတွင်ထိရောက်မှုမရှိပါ။
glutathione ဖြည့်စွက်ဆေးကိုပိုကောင်းတဲ့နည်းကအစာအိမ်အချဉ်ထဲက liposomal glutathione ကိုယူတာပါ။ တက်ကြွသော glutathione ၏ပါဝင်ပစ္စည်းသည် liposomes ၏အလယ်ဗဟိုတွင်ရှိသည်။ ဤဖြည့်စွက်စာကိုနှုတ်ဖြင့်သောက်ခြင်းသည်ခန္ဓာကိုယ်၏ glutathione အဆင့်ကိုတိုးမြှင့်ရန်အတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
Glutathione ကိုအထူး nebulizer ဖြင့်လည်းရှူရှိုက်မိနိုင်သည်။ သို့သော်သင်အသုံးပြုရန်အတွက်ဆေးညွှန်းလိုအပ်ပါလိမ့်မည်။
ဒေသအလိုက်အသုံးချနိုင်သော transdermals နှင့် lotion များရှိသည်။ ၎င်းတို့၏စုပ်ယူမှုနှုန်းသည်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံစိတ်မချရပါ။
သွေးကြောသွင်းခြင်းသည် glutathione ဆေးများကိုတိုက်ရိုက်သောက်သုံးသည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ထိုးဖောက်မှုအရှိဆုံးနည်းလမ်းလည်းဖြစ်သည်။
Glutathione ဖြည့်စွက်ဆေးသည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိသလောက်နည်းသည်။ ဤရွေ့ကားဖောင်းကနေအထိနိုင်ပါတယ်။ ဝမ်းဗိုက်ကြွက်တက်, ဓာတ်ငွေ့။ မစင်များနှင့်ဖြစ်နိုင်သောဓာတ်မတည့်မှုများဖြစ်နိုင်သည်။ glutathione ဖြည့်စွက်ဆေးများမသောက်မီသင့်ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်သင့်သည်။
လူတစ် ဦး အတွက်လိုအပ်သော glutathione သောက်သုံးမှုသည်လူတစ် ဦး ၏အသက်၊ ကိုယ်အလေးချိန်နှင့်ဇီဝကမ္မဗေဒအပေါ်မူတည်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်သူ၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသမိုင်းကြောင်းပေါ်တွင်လည်းမူတည်သည်။ မည်သည့်ဆေးပမာဏကိုသင်သောက်သင့်သည်ကိုစစ်ဆေးရန်သင့်ဆရာဝန်နှင့်ဆွေးနွေးသင့်သည်။
Glutathione သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာရှိအရေးကြီးသောမော်လီကျူးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အစွမ်းထက်သောဓါတ်တိုးပစ္စည်းဖြစ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်အား free radicals များကိုစစ်ဆေးရန်ကူညီသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားကျန်းမာစေပြီးနှလုံးပြproblemsနာများ၊ ကင်ဆာနှင့်နှလုံးရောဂါကဲ့သို့သောရောဂါများကိုကာကွယ်ပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာတွင် glutathione ၏အကောင်းဆုံးအဆင့်ကိုထိန်းသိမ်းရန်အရေးကြီးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ထိုသို့ပြုလုပ်နိုင်သည့်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် glutathione ကြွယ်ဝသောအစားအစာကိုစားနိုင်သည်၊ Glutathione ပါးစပ်ကိုသုံးနိုင်သည်၊
သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိအဆင့်ကိုပြောင်းလဲရန် glutathione ဖြည့်စွက်ဆေးများကိုသောက်ရန်ဆုံးဖြတ်သည့်အခါဆေးကုသမှုခံယူပါ။
Rouhier N, Lemaire SD, Jacquot JP (2008) ။ "photosynthetic သက်ရှိအတွက် glutathione ၏အခန်းကဏ္:: glutaredoxins နှင့် glutathionylation များအတွက်ထွန်းသစ်စလုပ်ဆောင်ချက်များကို" စက်ရုံဇီဝဗေဒ၏နှစ်ပတ်လည်သုံးသပ်ချက်။ 59 (1): 143-66 ။
ဖရန်ကို၊ Schoneveld, OJ; ပါပ်အေ၊ Panayiotidis, MI (2007) ။ "လူ့ရောဂါများ၏ရောဂါဗေဒအတွက် glutathione ၏အဓိကအခန်းကဏ္”" ။ ဇီဝကမ္မဗေဒနှင့်ဇီဝဓါတုဗေဒ၏မော်ကွန်းတိုက်။ 113 (4-5): 234-258 ။